तिथि मेरो पत्रु » कसरी प्रेम लागि मूड मा प्राप्त गर्न?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अगस्ट. 09 2020 |2मिनेट पढ्न
तपाईं र तपाईंको पति वा केटा साथी बस प्रत्येक अन्य बन्द हात राख्न सकेनन् जब एक समय थियो, तर अब कुराहरू परिवर्तन गरेका छन् र तपाईं शायद प्रेम बनाउने जस्तै महसुस. यस तपाईं वर्तमान मा हो स्थिति समान गर्छ? तपाईंले पहिले आफ्नो साथी संग छ प्रयोग गरिएको तपाईं धेरै मजा छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, प्रेम लागि मूड मा प्राप्त गर्न कसरी सिक्न.
यो परिवेश पूर्ण बनाउन
आफ्नो सम्बन्ध प्रारम्भिक दिनमा जोडे बस उहां बनाउने मूड हिट गर्न एक निजी कुना आवश्यकता. तथापि, सम्बन्ध ठूलो बढ्छ रूपमा, यो एक पटक अधिकारी प्रयोग आकर्षण गुमाउनुपर्ने सुरु. सही परिवेश राख्दा ती मानिसहरूलाई अझ सजिलै प्रेम लागि मूड मा प्राप्त गर्न मदत गर्न सक्छ.
तपाईं आफ्नो बेडरूम को रोशनी dimming र केही रोमान्टिक संगीत गरेर प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. सुनिश्चित आफ्नो ओछ्यानमा बरबाद छैन; अधिकांश मान्छे गन्दा छेउछाउमा रोमान्टिक महसुस गर्न सक्नुहुन्न. दुवै तत्काल turnoffs हुन सक्छ आफ्नो बेडरूम पनि तातो वा चिसो हुन नदिनुहोस्. तपाईं स्थापित एक वातानुकूलन वा ताप प्रणाली छ भने, यो छाँटकाँट. खोल्ने वा बन्द Windows पनि आफ्नो बेडरूम को तापमान normalizing तपाईंलाई मदत र आरामदायक रही लागि ठाउँ बढी उपयुक्त बनाउन सक्छ.
तनाव कम सेक्स ड्राइव को सबै भन्दा सामान्य कारणहरू मध्ये एक हो. हाल प्राप्त तथ्याङ्क कि आसपास प्रकट 15% मानिसहरू मुख्यतया किनभने तिनीहरूले जीवनमा छ तनाव कम कामेच्छा छ. टेस्टोस्टेरोन मानिसहरूको सेक्स ड्राइव नियन्त्रण हर्मोन छ. एक मानिस ठूलो हुर्कंदै गएपछि (30 वा बढी), आफ्नो टेस्टोस्टेरोन स्तर तल आउँदै शुरू; तनाव cortisol को उत्पादन ट्रिगर र अगाडी पनि आफ्नो टेस्टोस्टेरोन स्तर ह्रास. त्यसैले, तनाव द्वारा घोचेको एक मानिस अक्सर आफ्नो उमेर को अन्य मानिसहरू भन्दा कम कामेच्छा छ.
तपाईं स्पार्क फिर्ता ल्याउन र रूप अनायास प्रेम लागि मूड मा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने तपाईं फिर्ता केहि वर्ष गर्न प्रयोग गरिएको, तपाईं आफ्नो साथी सामना छ तनाव मार्न तरिकाहरू हुनेछ र त्यसै समयमा आफैलाई डे-बल दिए. आदर्श, तपाईं तनाव कुटपिट गरेर togetherness को भावना reinstating मा प्रत्येक अन्य मदत गर्नुपर्छ. उहाँलाई एक मालिश दिनुहोस् र त्यसपछि पक्ष फिर्ता गर्न उहाँलाई सोध्न, सँगै तातो स्नान ले, सँगै भोजन तयार, खाने पछि बगैंचामा एक पैदल लागि जाने; यी सबै तपाईं र तपाईंको साथी तनाव कम गर्न मदत र सिद्ध प्रेम बनाउने मूड मा प्राप्त हुनेछ.
तपाईं सेक्सी पक्का महसुस गर्नुहोस्
प्रेम बनाउने जस्तै महसुस गर्न, तपाईं पहिलो सेक्सी महसुस गर्नुपर्छ. तपाईं मार्ग बारे विश्वस्त छैनन् भने तपाईं पछिल्लो केही वर्ष मा प्राप्त वजन कारण हेर्न, जिम मारा प्रयास र यो केही गुमाउन. यो तपाईंलाई अधिक विश्वस्त बनाउन र तपाईं फेरि सेक्सी महसुस सुरु हुनेछ. तपाईं पनि नयाँ अधोवस्त्र बाहिर प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं मा सहज सुनिश्चित; सान्त्वना पनि सेक्सी महसुस लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो छ.
प्रेम लागि मूड मा प्राप्त गर्न, तपाईं आफ्नो सम्बन्ध देखि उराठ हटाउनेछ काम गर्न पर्छ. आफ्नो सम्बन्ध रोमाञ्चक हुन्छ एक पल्ट, तपाईं गाह्रो प्रेम गर्न मन को सही फ्रेम मा प्राप्त गर्न पाउनुहुनेछ.